အာဗြဟံသည် အကောင်းဆုံးနာမကိုအမှီအဓိပ္ပါယ်များ: စေ့စေ့နားထောင်, ဒေါသ, မတည်ငြိမ်သော, အရည်အချင်း, လေးနက်. ရယူ အာဗြဟံသည် နာမတျော၏အဓိပ္ပာယ်ကို.
အာဗြဟံသည် ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ. ၏ဟနျဂရေီပုံစံ အာဗြဟံသည်။ ရယူ အာဗြဟံသည် ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏မူလအစ.
အာဗြဟံသည် ဘို့ပြောရလျှင်အမည်များကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ဘာသာစကားများ: Aabraham, Aapo, Abe, Abraam, Abraão, အာဗြဟံသည်, အာဗြံ, Abramo, Avi, Avraham, Braam, Bram, Ebrahim, Ibragim, Ibraheem, Ibrahim, Ibrahima, Ibro, Ibrahim. ရယူ အာဗြဟံသည် အခြားဘာသာစကားများ.
နာမည်အသုံးအများဆုံးမျိုးရိုးအမည် အာဗြဟံသည်: Ori, Das, Cassetta, Berkeley, Shomo. ရယူ နာမည်မျိုးရိုးအမည်စာရင်း အာဗြဟံသည်.
အာဗြဟံသည် Cassetta Aabraham Cassetta Aapo Cassetta Abe Cassetta Abraam Cassetta Abraão Cassetta အာဗြဟံသည် Cassetta အာဗြံ Cassetta Abramo Cassetta Avi Cassetta Avraham Cassetta Braam Cassetta Bram Cassetta Ebrahim Cassetta Ibragim Cassetta Ibraheem Cassetta Ibrahim Cassetta Ibrahima Cassetta Ibro Cassetta Ibrahim Cassetta